Quincy Crew အသင်းနဲ့အတူ ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ Sumail. – Gaming Noodle
History of Quincy Crew
2018 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ (၂၉) ရက်တုန်းက Valve ရဲ့ DPC သတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် မြောက်အမေရိက အခြေစိုက်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ VGJ.Strom အသင်းဟာ အသင်းကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး ကစားသမားများကို နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဆိုပါ ကာလတုန်းက VGJ.Storm အသင်းမှ ကစားသမား (၄) ဦးဖြစ်တဲ့
SVG တို့ ဟာ SneyKing နေရာမှာ Universe ကို အစားထိုးလိုက်ပြီး Quincy Crew ဆိုတဲ့ အမည်အသစ်ဖြင့် အသင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် အဆိုပါ Quincy Crew ကို Forward Gaming မှာ Sponsor ပေးကာ ခေါ်ယူခဲ့တဲ့အတွက် အသင်းနာမည်ဟာ Forward Gaming အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားကာ နောက်ထပ်လူအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ပြီး 2018-2019 DPC အတွက် မြောက်အမေရိက အခြေစိုက်အသင်းတစ်ခုအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကာ အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့တာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ Quincy Crew အသင်းကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တစ်နှစ် နဲ့ တစ်လ အကြာမှာတော့ Forward Gaming/ Newbee ရဲ့ ကစားသမားဟောင်းများဟာ Evil Geniuses မှာ နာမည်ကြီး Mid Player တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sumail နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အသင်းကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
2. QUINN (CCNC)
5. SVG ဆိုတဲ့ Position များအတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Quincy Crew အသင်းဟာ TI9 အပြီးနောက်ပိုင်း ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကောလဟလများအတိုင်း Sumail နဲ့ Yawar တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦး ပေါင်းစည်းကာ အသင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Quincy Crew အသင်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းအတိုင်း Sponsor တစ်ခုကို စောင့်ပြီး နာမည်အသစ်နဲ့ပဲ ထက်မံ ထွက်ပေါ်လာမလား၊ ဒီ အသင်းနာမည်အတိုင်းကို Official Logo နဲ့ ထွက်လာမလား၊ ပြည်သူ့အချစ်တော် Sumail ဟာ လာမယ့် DPC 2019-2020 မှာ Quincy Crew အသင်းနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေ ကြီးကြီးမားမားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ဦးမလားဆိုတာကတော့ လွန်စွာမှ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
2018 ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ၊ (၂၉) ရကျတုနျးက Valve ရဲ့ DPC သတျမှတျခကျြတှကွေောငျ့ မွောကျအမရေိက အခွစေိုကျအသငျးတဈခုဖွဈတဲ့ VGJ.Strom အသငျးဟာ အသငျးကို ဖကျြသိမျးခဲ့ရပွီး ကစားသမားမြားကို နှုတျထှကျခှငျ့ပွုခဲ့ရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အဆိုပါ ကာလတုနျးက VGJ.Storm အသငျးမှ ကစားသမား (၄) ဦးဖွဈတဲ့
SVG တို့ ဟာ SneyKing နရောမှာ Universe ကို အစားထိုးလိုကျပွီး Quincy Crew ဆိုတဲ့ အမညျအသဈဖွငျ့ အသငျးတဈခုကို တညျဆောကျခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ အဆိုပါ Quincy Crew ကို Forward Gaming မှာ Sponsor ပေးကာ ချေါယူခဲ့တဲ့အတှကျ အသငျးနာမညျဟာ Forward Gaming အဖွဈသို့ ပွောငျးလဲသှားကာ နောကျထပျလူအပွောငျးအလဲမြားပွုလုပျပွီး 2018-2019 DPC အတှကျ မွောကျအမရေိက အခွစေိုကျအသငျးတဈခုအဖွဈ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကာ အောငျမွငျမှုမြား ရရှိခဲ့တာကို အားလုံးသိပွီးဖွဈပါတယျ။
ယခုအခါမှာတော့ Quincy Crew အသငျးကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး တဈနှဈ နဲ့ တဈလ အကွာမှာတော့ Forward Gaming/ Newbee ရဲ့ ကစားသမားဟောငျးမြားဟာ Evil Geniuses မှာ နာမညျကွီး Mid Player တဈဦးဖွဈတဲ့ Sumail နဲ့ ပူးပေါငျးပွီး အသငျးကို ပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
5. SVG ဆိုတဲ့ Position မြားအတိုငျး ဖှဲ့စညျးခဲ့တဲ့ Quincy Crew အသငျးဟာ TI9 အပွီးနောကျပိုငျး ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ကောလဟလမြားအတိုငျး Sumail နဲ့ Yawar တို့ ညီအဈကိုနှဈဦး ပေါငျးစညျးကာ အသငျးတဈခုအနနေဲ့ ထှကျပျေါလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ Quincy Crew အသငျးရဲ့ သမိုငျးကွောငျးအတိုငျး Sponsor တဈခုကို စောငျ့ပွီး နာမညျအသဈနဲ့ပဲ ထကျမံ ထှကျပျေါလာမလား၊ ဒီ အသငျးနာမညျအတိုငျးကို Official Logo နဲ့ ထှကျလာမလား၊ ပွညျသူ့အခဈြတျော Sumail ဟာ လာမယျ့ DPC 2019-2020 မှာ Quincy Crew အသငျးနဲ့အတူ အောငျမွငျမှုတှေ ကွီးကွီးမားမားကို ဆှတျခူးနိုငျဦးမလားဆိုတာကတော့ လှနျစှာမှ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးပါတော့တယျခငျဗြာ။